Lego Batman 76160 Mobile Bat Base ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Brick Fanatics
14 / 08 / 2020 29 / 07 / 2021 ရော့ Paton 2344 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 70165 Ultra ကိုယ်စားလှယ်မစ်ရှင်ပင်မ, 76120 Batman Batwing နှင့် Riddler Heist, 76160 မိုဘိုင်း Bat- အခြေစိုက်စခန်း, 8635 မိုဘိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စင်တာ, အေးဂျင့်များ, Batgirl, Batman, ကြေးကျား, Lego, Lego Batman, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Man-Bat, မစ္စတာ Freeze, Nightwing, Ultra အေးဂျင့်များ
ပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်တွင် 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း တစ်စျေးအလွန်အကျွံမလိုအပ်ဘဲအငယ်တန်းဖြစ်ပါတယ် Lego Batman အစုံ ပြီးတော့အဲဒီကနေဆင်းသက်လာတယ်။
theme: Batman စျေးနှုန်း: £ 79.99 / $ 89.99 / € 87.72 အပိုင်းပိုင်း: 743 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
အမှန်မှာ၊ ထပ်မံ၍ စဉ်းစားသုံးသပ်ရလျှင် ၇၆၁၆၀ Mobile Bat Base သည်စျေးအလွန်ကြီး။ မလိုအပ်သောအငယ်တန်းဖြစ်သည် Lego Batman အစုံ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဘဲတိကျတဲ့နှင့်အလွန်ငယ်ရွယ်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုများအတွက်သပ်သပ်ရပ်ရပ် Lego အခြားသူများအတွက်တည်ဆောက်သူများသည်၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဖြန့်ချိသော Bat-winglets နှင့်ထိပ်ဆုံးတွင်ကပ်ထားသည်။ သင်က၎င်းနှင့်တူအောင်လုပ်ရန်လုံလောက်စွာမတွန့်ဆုတ်နိုင်ပါ Batman အစုံ
Lego Batman (သို့မဟုတ် Lego DC ရုပ်ပြစူပါသူရဲကောင်းများနှင့်အတူသတ်မှတ် Batman သူတို့ကို၌) မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ap သို့ကျကြပုံရသည်သောဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်articular ပုံစံ, အငယ်တန်းအစုံကနေတစ်နှစ်သွားပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ကိုအစုံနှင့်အတူအခြားတစ်နှစ်မှလာမည့်နှစ်တွင်နောက်ကျောကိုပြန်သွား။ ထိုအစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ 7+ နှင့် 8+ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်မထားရှိသောအသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြံပြုချက်များအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် ၂၀၁၈ ကကျွန်တော်တို့ကိုtrရာမလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးခဲ့တဲ့အိပ်မက်ဆိုးအိပ်မက်ဆိုးမက်မက်မက်မက်ဖွယ်ရာမဟုတ်တဲ့ 2018 နဲ့စိတ်စွဲမှတ်သွားခဲ့တယ် 76120 Batman Batwing နှင့် The Riddler Heist နှင့် 76122 Batcave Clayface ကျူးကျော်၂၀၂၀ တွင် ၇၆၁၅၉ Joker's Trike Chase နှင့်ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းအရာနှင့်ထပ်မံစိတ်ပျက်ရန်ခြိမ်းခြောက်သကဲ့သို့ 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း။ Dark Knight's မှဤနောက်ဆုံးဖြည့်စွက်မှုများ Lego ပြသမှုနှင့်စကေးကျော်ကစား ဦး စားပေးကြီးမားသော, ရှုပ်ထွေးသောမော်တော်ယာဉ်များ - စုဆောင်းခြင်း, ၏မျက်နှာပေါ်မှာ, ပို။ အငယ်တန်း - ဖြစ်ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့် 76120 Batman Batwing နှင့် The Riddler Heist သည်နောက်ဆုံးပေါ်လိမ္မာပါးနပ်သော update ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် classic 76122 Batcave Clayface ကျူးကျော်မှုသည် Batcave နှင့်ဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝပြီးထိရောက်သောရဲကားဒီဇိုင်းပါသော Gotham PD ၏ရှားပါးအရသာဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်ပိုမိုနက်နဲသည့်အသေးစိတ် Batcave ဒီဇိုင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ Lego 2006 မှ Batcave ဤအစုံစစ်မှန်သောတစ် ဦး ထိတွေ့city သူတို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအသေးစိတ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှစ် ဦး စလုံး၌တည်၏။ ထိုအခါပရိသတ်ငယ်ရွယ်သူများအတွက်မူ၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကစားခြင်းနှင့်ဟန်ချက်ညီညီသည်art တ ဦး တည်းအတွက်ကုမ္ပဏီကြီး Clayface နှင့်အခြားအတွက် Riddler ရဟတ်ယာဉ်ရန်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်, 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း 743 အပိုင်းအစများအနက်ရောင်နှင့်အနက်ရောင်မီးခိုးရောင်များကို gimmicks galore ဆောင်ကျဉ်းပေးသည်၊ ၎င်းကိုပိုမိုသတိပြုမိစေရန် Lego Batman ပန်ကာသည်စိတ် ၀ င်စားစရာအနည်းငယ်သာပေးသည်။ အဓိကအားဖြင့်မူရင်းသဘောသဘာဝမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ The Lego အုပ်စုတွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာသောမိုဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်းများဖြစ်သည့် Alien Conquest, Agents, Ultra Agents တို့နှင့်အတူဤကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းအခြေခံများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ CITY, ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်နှင့် Ninjagoအနည်းငယ်အမည်, အားလုံးထိုကဲ့သို့သောကုသမှုရတဲ့။ ဒါဟာအတူတူကြိုးစားရန်အချိန်သာကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည် Batman...
ဒါပေမယ့်မိုဘိုင်းကွန်ယက်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူး Batman ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မူတစ်ခုရဲ့အယူအဆမှာစူးစမ်းလေ့လာပြီးပျော်မွေ့နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေလို့ပါ Batmanမိုဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်း၊artgadgetry သူ၏လက်နက်တိုက်နှင့်အတူ icularly ။ မူရင်း၏မရှိခြင်းအများဆုံးဝေဖန်ခံစားရတယ် 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း ထဲမှာ လြှောကျလှာ ကြောင်းစိတ်ကူး၏။
အသစ်သောအပိုင်းအစများ၊ စတစ်ကာများ၊ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းနှင့်အနည်းငယ်သောအပြောင်းအလဲများသည်ဤတွင်ဖုံးကွယ်။ မရနိုင်ပါ။ ဤအရာသည် Agents ၏ 8635 Mobile Command Center ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ် - ပို၍ ဆိုးသည်မှာအရောင်အစီအစဉ် - Ultra Agents ၏ 2008 Ultra Agents Mission ရုံးချုပ် မော်တော်ယာဉ်ငယ်များသည်ကားကြီးများမှဝေးရာသို့ထွက်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်နောက်တွဲယာဉ်ရှိနေရာများ၊ ပုန်းရှောင်နေသောနေရာများ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုခြေရာခံရန်မျက်နှာပြင်ကြီးများနှင့်ထိုင်ခုံနေရာများ၊ လူကြမ်းအဖြစ်ကိုင်ဆောင်မည့်အခန်းငယ်တစ်ခုနှင့်၎င်းအားတောက်လျှောက်သယ်ဆောင်ရန်ကုန်တင်ကားကြီးများဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားအားလုံးအတွင်းသေသပ်စွာဆောက်လုပ်ထားကစားမှတ်ဖြစ်ကြသည် 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း, သို့သော်, အားလုံးဒီဇိုင်းနှင့်အခြား themes များအများကြီးအတွက်မတိုင်မီလာကြပြီအစုံနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်တညျဆောကျနေကြသည်။
နှင့် Lego partအတိတ်ကာလမှလူကြိုက်များသောဒီဇိုင်းသဘောတရားများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုအသုံးချခြင်းသည်ဘာမျှမမှားပါ အသစ်အစုံ နှင့်အသစ်သော themes များ, ဒါပေမယ့်, 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း ပင်ပန်းတဲ့ mobile command base trope ဖြစ်လာတာကိုဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်ခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ အရေးကြီးတဲ့အချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုဘုံ Cross-theme တည်ဆောက်မှုတွင်လုံလောက်စွာထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ နောက်တွဲယာဉ်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့လက်ကမ်းကြော်ငြာကနေဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး BatmanBat ကဲ့သို့လက်ခံရန်အလွန်ကြင်နာသော (သို့မဟုတ်ဆင်းရဲသော) မျက်စိလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာ, ထရပ်ကားယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဘင် Affleck ရဲ့ဗားရှင်းပေမယ့်တစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လျှို့ဝှက်မဟုတ်ပါဘူး Batman အမှန်တကယ်ပိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့သတ်မှတ်ဒီဇိုင်း, မဟုတ်, အပြန်အလှန်, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ဘူး Batman, ကြီးမားသော winglets ကျော်လွန်ပေါ်မှာမှီဝဲ။ Bruce Wayne သည် Bat- တောင်ပံများပေါ်တွင်အနက်ရောင်ထရပ်ကားတစ်စီး ၀ ယ်ပြီးယစ်မူးစွာကော်နေသလား။
76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း ရီစရာပါပဲ Batman တစ်ရီစရာအခြမ်းနှင့်ရှိပါတယ် Lego Group သည်ရံဖန်ရံခါ၎င်းကိုအမှီပြုလိုသည်။ သို့သော် camper တစ်ခု၏အရောင်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ပုံကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ Batman အလွယ်တကူ 76160 ဆင်ခြေရန်။
ဒါက p ပါart minifigures ၏ရွေးချယ်ရေးအထိ။ ဤအစုကိုသိမ်းဆည်းရန်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက၎င်းသည်အက္ခရာခြောက်လုံးပါ ၀ င်သည်။ အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသောဘုံမှအသစ်နှင့်ထင်ရှားသောအထိ၊ အားလုံးသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖန်တီးထားသောအရောင်အဆင်းနှင့်ဒီဇိုင်းတွင်သူတို့နှင့်ပါလာသည့်ကားများဖြစ်သည်။
သူတို့ကဲ့သို့လှပပြီး photogenic နှင့်ဖြည့်စွက်အဖြစ်ယုံကြည် Batman ယခုလက်ရှိလက်ထဲရောက်တော့မည့်သေးငယ်သောအသေးစားစုဆောင်းမှု၊ 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း ပေါင် ၇၉.၉၉ တန်ကြေးရှိပြီးပြောရန်လုံလောက်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုများစွာထည့်သွင်းထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်မူရင်းအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးမပြုဘဲပြုလုပ်သည်artကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီး၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ icularly Lego မိုဘိုင်း command အခြေစိုက်စခန်း၏ set formula ကို - ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်စေ၊ Lego ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သတ်မှတ်ထား, ဒါမှမဟုတ်အတွင်းတစ် ဦး ယုံကြည် Lego Batman စုဆောင်းမှု။
အလွန်အငယ်ဆုံးသည် Lego ပတ်ပတ်လည်ပျံ, လက်သမား 76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း's startအသက် (၈) နှစ်အထိထောက်ခံချက်ပေးသည့်အတွက်ဤနေရာတွင်သေချာပေါက်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်တဲ့အသက်အရွယ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့မည်သူမဆိုသည်အခြားအခင်းအကျင်းများဆီသို့တိမ်းယိမ်းနေကြလိမ့်မယ်။ ထိုအဖို့တစ် ဦး disservice ပါပဲ Lego Batman.
76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း မှာမှာယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego စတိုး Disney စမ်းအသစ် Frozen ရရှိသွားတဲ့နှင့် Star Wars ပြသမှု
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75978 Diagon Alley အတည်ပြုခဲ့သည် →